NISA oo hawlgal ka fulisay Mubaarak, sarkaal Al shabaab ahaa oo la dilay - Halbeeg News
MUBAARAK (HALBEEG) – Ciidamada ammaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa saqdii dhexe ee xalay oo Talaado ahayd, waxay hawlgal milateri ka fuliyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose.
Qoraal kooban oo lagu baahiyey barta Twitter-ka ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA), ayaa lagu sheegay in bartilmaameedku ahaa koox ka tirsan Al shabaab oo qorsheynaysay sidii ay weerarro uga fulin lahayd gudaha magaalada Muqdisho.
Qoraalka NISA waxaa sidoo kale lagu xusay in iska hor imaad muddo kooban socday uu dhex maray ciidamada hawlgalka fuliyey iyo xubno ka tirsan Al shabaab, iyadoo iska hor imaadka uu ku geeriyooday sarkaal ka tirsanaa Al shabaab.
Ciidamada hawlgalka fuliyey ayaa la sheegay in ay dib uga soo baxay deegaanka Mubaarak, si looga baaqsado khasaare soo gaara dadka shacabka ah.
Howlgal uu ciidanka amnigu ka fuliyay Magaalada Mubarak ee Gobalka Shabellaha Hoose habeynimadii 11-ka Sabtembar, ayaa isrisaaseyn kadib waxaa lagu dilay xubin Alshabab ah kuwa kalana lagu dhaawacay. Kooxdaan ayaa ku howlanaa weeraro ay ka gaysataan magaalada Muqdisho.
— NISA (@HSNQ_NISA) September 11, 2018
Ciidamada amniga ayaa dib uga soo baxay dagaalka si aysan shacab wax uga soo gaarin.
Ciidamada Amniga shacabka ayay ilaaliyaan halka Alshabab ay had iyo jeer beegsadaan dadka rayidka ah kuna dhax dhuuntaan.
Nagu garab istaag ka hortaga iyo la dagaalanka Alshabab.
Ugu dambayntii, Hay’adda NISA ayaa bulshada ugu baaqday inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka, qaybna ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaan Al shabaab.
Ciidamada Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) ayaa kordhiyey hawlgallada ka dhanka ah Al shabaab, tan iyo markii isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka sare ee hay’adda.
Intii lagu guda jiray bishan September oo kelya ciidamada NISA ayaa fuliyey ugu yaraan saddex hawlgal oo midka xalay dhacay uu ugu dambeeyey.
September 2, 2018 ciidamada NISA ayaa Muqdisho ku qabtay nin ka tirsan Al shabaab oo qorshaynayey qaraxyo iyo dilal Al shabaab ka fulin lahayd isla magaalada Muqdisho.
September 7, 2018 ciidamada NISA ayaa hawlgal kale oo ay Muqdisho ka sameeyeen waxay kusoo qabteen koox ka tirsan Ururka Al shabaab oo la shaaciyey in ay dilalka qorshaysan iyo qaraxyada qaabilsanaayeen.
MARKA: Tobannaan lagu soo qabqabtay hawlgal ay maanta ciidamadu sameeyeen